China SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Kutsvaga Yese Solution vagadziri uye vanotengesa | Jianma
ASEA tekinoroji, chizvarwa chitsva che nucleic acid yekukurumidza kuona chikuva chakazvimiririra chakagadzirwa nekambani, ndeyechokwadi, yakapusa uye inokurumidza nucleic acid yekukurumidza kuona tekinoroji, iyo inogona kupedzisa maitiro ese kubva ku "sampling kune mhedzisiro" mumaminitsi makumi matatu, kunatsiridzwa kwekuvandudzwa kweiyo nucleic acid kuona kubva ku "hour level" kusvika "minute level".
ASEA tekinoroji, chizvarwa chitsva che nucleic acid yekukurumidza kuona chikuva chakazvimiririra chakagadzirwa nekambani, ndeyechokwadi, yakapusa uye inokurumidza nucleic acid yekukurumidza kuona tekinoroji, iyo inogona kupedzisa maitiro ese kubva ku "sampling kune mhedzisiro" mumaminitsi makumi matatu, kunatsiridzwa kwekuvandudzwa kweiyo nucleic acid kuona kubva ku "hour level" kusvika "minute level"
Novel coronavirus 2019 novel coronavirus novel coronavirus (nCoV) ORF1ab uye N magene akaonekwa mumasabs uye vanofungidzirwa kuti bronchoalveolar lavage fluid masampula kubva kune vanofungidzirwa huro swabs uye vanofungidzirwa bronchoalveolar lavage fluid maseru. Chigadzirwa chawana chitupa cheEC uye chakapinda chena runyorwa rweanopokana nedenda zvinhu zvinokurudzirwa nebazi rezveMabhizimusi. Solid uye emvura reagents inosangana nezvinodiwa zveakasiyana ekuchengetedza zviitiko, zvichikupa iwe zvakasiyana siyana sarudzo.
Iyo nyowani korona yekuona chirongwa (sampuro yekugadzirisa + kukwidzirisa + chimbo) che
Qingdao Jianma Gene Technology Co, Ltd. haidi marabhoritari epamberi, hapana additiona l nucleic acid matanho ekubvisa.
Iyo nyowani korona yekutsvaga yakazara mhinduro (sampuro yekugadzirisa + kukwidzirisa + chiridzwa) haidi yepamusoro ma laboratori, hapana magineti bead nucleic acid ekudzora matanho, hapana chikonzero cheakakura anodhura ekuwedzera chiridzwa.
Maminitsi makumi matatu nemashanu chete anodiwa kubva kuSampuli kusvika kuMhinduro.
Kune imwechete sampuro, inochengetedza 70% yenguva kana ichienzaniswa neyechinyakare RT-PCR, uye inowedzera kugona kwekuona kusvika ku375%.
Zvigadzirwa zvine chitupa mudzimba uye CE chitupa, inogona kupa seti yakazara yezvigadzirwa zvekutumira kunze.
Utano, uye hauchamiriri!
Kubvisa-kusununguka kwekukurumidza kuona protocol inokurudzirwa seinotevera:
Mudziyo: ND360 Real-nguva fluorescence yakawandisa PCR system.
Kubvisa: JM101 Rapid nucleic acid yekubvisa kit.
Kuziva:JM001 SARS-CoV-2 nucleic acid yekutsvaga kit (Rapid PCR Fluorescence Method).
Lyophilized reagent inowanikwa kutsigira yakajairwa tembiricha yekufambisa
mhando Nyika yakasimba
Kuchengetedza uye nzira yekufambisa tembiricha yemuchadenga
Saizi yebhokisi 25cm * 20cm * 18 cm
Nhamba yemakiti 10 mabhokisi
uremu 5 kg
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved. Rapid Nucleic Acid Kubvisa Kit, Kubvisa-Mahara Kit, China Rapid Bvunzo Kits, Canine Parvovirus (Cp),